Mbido AKWINGKWỌ UKWUKA FOOTBALL Ndị egwuregwu bọọlụ Bekee Ben White Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Ben White Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Nwanne nwanyị (Ellie), Deede (Malcolm), Enyi nwanyị / Nwunye ka ọ bụrụ na Ndụ. Ọzọkwa, Ndụ Onwe Ya na Net Worth wdg.
Na nkenke, anyị na-egosipụta akụkọ ihe mere eme nke onye na-agba ọsọ ọsọ ọsọ, ndị na-agba ọsọ bọọlụ maara ihe ọ pụtara inwe ọjụjụ ihu na ndụ. Ben White Akụkọ malitere site na nwata rue Poole (Obodo dị na England) rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama n'egwuregwu mara mma.
Iji mee ka agụụ autobiography gị sie ike na ọdịdị nke Biography, anyị agafeela Early Life and Rise Gallery. N'ezie, ihe ị hụrụ n'okpuru na-achikọta Njem Ndụ ya.
Ben White Biography - Lelee Mbido Ya na Ọganihu Akụkọ.
Gị na m maara na Ben bụ onye a pụrụ ịdabere na ya, onye nweworo ikike ịme obe na ịtụnanya dị ịtụnanya. Sịkwa, DailyMail Akụkọ na Brighton tinyere ngwa ngwa £ 50m ngwa ngwa mgbe akpọchara ya na ndị otu England maka Euro 2020.
N'agbanyeghị aha a na-akpọ aha ya, Lifebogger ghọtara na ọtụtụ ndị na-agba bọl agụbeghị akwụkwọ Ben White Biography. Anyị akwadebela ya n'ihi ịhụnanya anyị nwere maka Star Star na-arị elu. Ugbu a na-ebutụbeghị, ka anyị bido.
Ben White Storymụaka Akụkọ:
Maka ndị na - ebido Life Life, Benjamin bụ n’ezie, ezigbo aha ya na Ben bụ naanị aha njirimara. A mụrụ Benjamin William White na 8th nke October 1997 na nne ya, Carole White na nna, Barry White, na Poole, England.
The England International Footballer bịara n'ụwa dị ka otu n'ime ụmụ abụọ (ya na nwanne nwanyị) amụrụ site na njikọ dị n'etiti ndị mụrụ ya ndị nọ n'okpuru.
Zute ndị nne na nna Ben White. Nne ya, Carole na nna ya, Barry.
Little Ben (nke dị n'okpuru ebe a) anaghị eji oge ọ bụ nwata naanị ya na papa m na mama m. Ya na nwanne ya nwanyị bụ Ellie tolitere - onye ọ na-ekwukarị dị ka onye dị nro, onye na-ahụ n'anya, onye na-elekọta ma nwee ọmịiko.
Nke kacha mma Ben White Childhood Photo
Ahụhụ n'ihi Ọrịa Childhoodmụaka:
Dịka nwatakịrị, ndụ kụziiri Ben otú ọ ga-esi nwee ume ma gosipụta obi ike n'agbanyeghị nsogbu. Nke a bụ oge ọ lụrụ ọgụ iji merie ọrịa na-eyi ndụ egwu dịka nwatakịrị.
Ọnwa ole na ole ka a mụsịrị ya, ndị nne na nna Ben White chọpụtara na usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ adịghị arụ ọrụ. Ọ bụ n'ezie ọnọdụ dị egwu nye ezinụlọ. Dị ka otu ajụjụ ọnụ si kwuo, nne Ben White kwuru na;
Ọ bụrụ na onye ọ bụla atịa, ọ ga-eme ka oyi baa ya n'ahụ.
Dị ka Carole si kwuo, usoro mgbochi Ben adịghị arụ ọrụ. Dịka nwatakịrị, ọ tara ahụhụ site na appendicitis ọ were obere oge tupu ọ gbakee site na ọrịa mbufụt.
N'adịghị ka ọtụtụ ụmụaka, Ben White nwere ihe dị ka ọrịa asaa dị iche iche, mmepe nke mere ka ọ nọrọ n'ụlọ ọgwụ ruo ọtụtụ ọnwa. Mgbe ọtụtụ ọgwụgwọ gasịrị, ndị dọkịta na-adụ ndị nne na nna Ben White ọdụ ka ha kuru nwa ha nwoke - na-ekwusi ike na ọ ga-enwe nchebe ebe ahụ.
Ihe kpatara ịhapụ Ben n'ụlọ ọgwụ bụ maka ohere ọ nwere inwe ọrịa na-arịa ọrịa n'ụlọ ọgwụ (HAIs). Eziokwu bụ, Ben na-emebi emebi na ahụ ya enweghị usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ nke na-egbu ahụhụ ndị ndị ọrụ ahụike na-agbasa.
Ben White Mgbakwunye Ọrụ:
Iji zere ọnọdụ ya, Barry na Carole kwetara ime ya ịwa ahụ. Ya mere, mgbe ọ dị afọ asaa, Ben White nwere mgbakwunye ya.
N'ịgbaso ọrụ ahụ, ndị dọkịta tụrụ aro ka ọ nọrọ na-eri ọgwụ mgbochi oge niile. Ọzọkwa gbakwunyere nsogbu ahụike Ben White na eziokwu na o nwere oke nfụkasị - n'ihi nsogbu usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ.
Dị ka ụzọ isi jikwaa allergies, Barry na Carole bu Epipen ebe ọ bụla ọ kwagara. Nke ahụ bụ naanị ụzọ iji zọpụta ya.
Dị ka ndị nne na nna, anyị chere na ọ bụrụ na anyị kechie Ben n'ime afụ ma ọ bụ hapụ ya ka ọ mee ihe ọ chọrọ ka ọ nwee ndụ kacha mma.
Obi dị anyị ụtọ na nwa anyị nwoke malitere ịgbake.
Ezigbo Ezinụlọ Ezinụlọ Ben White:
Banyere usoro mmekọrịta nke Britain, a na-akpọ ezinụlọ ya akara n'okpuru klaasị dị ala. udi. Ndị nne na nna Ben White nwetara ego site na ọrụ ngalaba ọrụ na-enweghị ọrụ. Mama ya bụ onye na-elekọta ụlọ mgbe papa ya rụrụ ọrụ dịka Onye na-elekọta Ubi na Onye Nrụpụta Ihe.
Dị ka nwatakịrị, obere Ben nwere obi ụtọ iso Nna ya gaa ọrụ ya. Nnyocha na-egosi na ọ kachasị nwee mmasị na inyere Barry aka ịrụ ọrụ abụọ na ịrụ ọrụ slabb.
Maka ezinụlọ White, ikiri bọọlụ bụ ihe na - ewetara mmadụ niile ịnọdụ ala. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ọ bụ ihe metụtara ezinụlọ. Ọ nwere ike ịmasị gị na Ben malitere ịgba bọl bọl ozugbo ọ bụ nwata.
Ben White Family malitere:
Ihe mbụ, ọ na - esonye n'ụdị kpakpando England - Nkume Mason, James Ward-Prowse na Alex Oxlade-Chamberlain wdg- ndị nwere mgbọrọgwụ ha si England South South. Nke a bụ Poole, obodo England ebe ezinụlọ Ben White Family si.
Ihe ngosi a na-akọwa Ben White's Origin.
Poole abughi nani ala gbara osimiri okirikiri kamakwa ọdụ ụgbọ mmiri na-adọta ndị ọbịa na nnukwu ọdụ ụgbọ mmiri ya na osimiri Blue Flag.
Ben White Education na Ọrụ Buildup:
Mgbe ọ dị obere, kpakpando England kwupụtara ọchịchọ nke ndụ ya nye ndị ezinụlọ ya. Ben gosipụtara echiche nke ịga ụlọ akwụkwọ dịka nwanne ya nwanyị, Ellie.
Otú ọ dị, o nwere echiche siri ike nke ịghọ ndị ọkachamara n'ịgba ọsọ. Ben nwere nkwenye a n'agbanyeghị nsogbu ahụike ya.
Na-ekwu okwu na Press, Defender kwuru na mama ya (Carole White) mere ka ya hụ football n'anya. N'ikwu nke a, ncheta mbụ ya nke igwu egwuregwu ahụ bụ ya na ezinụlọ ya.
M na-echeta uwe o koro n'elu nke ọ sara mgbe m na-agba gburugburu. M ga-agwazie ya ka o buru ihe mgbaru ọsọ.
O siiri mama m ike ịsị mba n'agbanyeghị na m ji bọl bọl na-agba ya ọtụtụ oge. Ọ na-emerụ ọtụtụ ọnya ma na-enwere ndidi na-adịgide adịgide.
Ben White Football Akụkọ:
Southampton scouts hụrụ obere Ben mgbe ọ na-egwu egwuregwu na mpaghara ya. Na-esote ikpe na-aga nke ọma (na Long Lane, Marchwood), onye na-eto eto (afọ asatọ) sonyeere ụlọ akwụkwọ mara mma.
Ọ bụ ezie na Ben White abụghị ụmụ amaala kachasị mma, enwere ụmụaka ndị ọzọ dị nsọ karịa ya. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ hụrụ onwe ya na-enwe ọganihu site na otu ọgbọ agụmakwụkwọ na-enweghị nsogbu.
N'ụzọ dị mwute, otu nsogbu bịara n'afọ 2014 - n'oge Ben bụ 16 - afọ abụọ tupu gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ. N'oge a, Southampton emeela atụmatụ siri ike na ndị na-eto eto ha, na ebumnuche ịmanye mmadụ ole na ole na bọọlụ.
Igha akwukwo ulo akwukwo:
Mgbe ngụkọta nke afọ asatọ siri ike na agụmakwụkwọ Southampton, Ben White wepụtara. N’ịbụ onye nwere nkụda mmụọ ma kpebisie ike, ọ nakweere ndakpọ olileanya ahụ dị ka ule kasịnụ ná ndụ ya. N'ikwu okwu banyere akụkọ ịjụ ya, Ben kwuru otu oge;
“N’ụbọchị m si na Southampton pụta, mama m jụrụ m ma m ka chọrọ ịbụ ndị na-agba ama ụkwụ. Azara m ya sị ee.
Ozugbo ahụ, ọ malitere klọb dị iche iche wee kpọọ m n'ụlọ ụfọdụ, jisiekwa ike weta m ọnwụnwa ụfọdụ. ”
N'agbanyeghị ịjụ uwe Premier League, ọtụtụ klọb Championship nwere mmasị ịbanye na onye ahụ na-agbachitere ya. N'ime ihe niile, otu ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ (Brighton & Hove Albion) hụrụ ihe na White na ndị nsọ enweghị ike ịhụ.
O were ọnwa ole na ole tupu Ben abanye na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Brighton. Naanị mgbe ndị nsọ chụpụrụ ya, Leicester (mgbe ahụ otu ndị otu Championship) na Bristol City kpọrọ ya maka ule.
Ben mechara banye na Brighton n'ihi na ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ dị nso (Poole) ebe ndị mụrụ ya bi. Mgbe ọ nọ ebe ahụ, nwatakịrị ahụ mụtara ihe banyere traject nke aha kachasị amata aha klọb - Gareth Bale na Theo Walcott.
Ọ Benụ nke ezinụlọ Ben White amaghi oke n'oge ọ na-aga nke ọma site na agụmakwụkwọ agụmakwụkwọ. N'ime afọ 2016, Ben mere ọkachamara mbụ ya maka Brighton dị ka afọ 18 - na Njikọ Njikọ megide Colchester United.
Ben White Biography - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mgbe ọ banyere n'egwuregwu football, nwata ahụ - dị ka ọtụtụ ndị ọzọ - malitere ịchọ ahụmịhe mgbazinye ego. Ben chere na ọ dị ya mkpa ịchịkọta ahụmịhe site na ịbụ onye ọkpụkpọ egwuregwu mbụ na ebe ọzọ.
Newport County, otu ọgbakọ egwuregwu bọọlụ nke Njikọ nke abụọ dị na Newport, South Wales bịanyere aka na nwata ahụ na 1st nke August 2017. Michael Flynn kọwara mbinye ego White nye Newport dị ka "nnukwute ọchịchị" n'ihi eziokwu ahụ na ọ nwere nnukwu obi ụtọ nwee ya.
O yiri ka Michael Flynn ziri ezi. Ben White meere onwe ya aha site na inyere Newport aka na nnukwu klọb ndị ka ukwuu na mpaghara Bekee dị elu (Championship). Nke a nwere ike ịbịa n'otu asọmpi - Igodo FA.
Na 7 Jenụwarị 2018, White nyeere Newport aka imeri Leeds United (ụlọ 2-1) na iko FA nke atọ. Chọta n'okpuru isi ihe egwuregwu ahụ ebe Ben White mere aha maka onwe ya.
Mgbe Ben White bibiri Leeds, ụlọ ọrụ ahụ malitere ịhazi atụmatụ ịchụpụ Thomas Christiansen (onye na-elekọta ha n'oge ahụ). Site na mmeri ahụ, Newport gara n'ihu na FA Cup nke anọ maka oge mbụ kemgbe oge 1978-79.
Ọ na-ewu ewu site na Spurs:
Ebe bọs na-esote ya bụ Nke Mauricio Pochetino Tottenham hotspurs, klọb nwere Harry Kane dị ka onye ndú nke ndị ọrụ ya. Na egwuregwu ahụ, Ben White jidere ihe nchebe Newport, na-eme ka ndị Spurs ghara imeri ya.
Ihe osise a mere ka ọ bụrụ na ọ ga - eme egwuregwu ọzọ na Tottenham - Wembley Stadium. Na egwuregwu ahụ (nke Newport furu efu), a na-enye Ben White otu aka maka ikike ya ijide Harry Kane.
Ogologo oge gara aga, Ben White maara otú e si edozi Harry Kane.
Jụ nkwekọrịta mmiri na-agba agba maka ịgba bọọlụ mgbe niile:
Omume Ben White megide Harry Kane mere ka ọ jikọta ya na ịkwaga Tottenham Hotspur. N'oge ahụ, ọ jụwo ọrụ nkwekọrịta ọhụrụ na Brighton.
Ben achọghị ka ahapụ ya dịka Juan Foyth onye nwere ndị okenye na-egwuri egwu n'ihu ya na Spurs.
N'ikwu nke a, ọ chọghị ịbanye n'òtù ebe ọ ga-anọ n'azụ nnukwu aha dị ka Toby Alderweireld na Jan Vertonghen. Mgbe ọ jụrụ Spurs, Pochetino wee banye na onye na-agbachitere Columbian, Davinson Sánchez.
N'ikwu okwu banyere bọọlụ oge niile, Ben White jụrụ ịlaghachi na Brighton n'ihi na ọ hụrụ na ọ bụ ụlọ ọrụ nhọrọ nke anọ nke ụlọ klọb - n'azụ Lewis Dunk, Shane Duffy na Leon Balogun.
Ben White Bio - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Ihe oma na-abiara ndi kwenyere na obere ihe nke ndu. N'ikpeazụ, Ben White mechara chọta ụlọ ọgbakọ a - Peterborough United - nke ọ nabatara inye ego ha.
Dị ka ya si kwuo, ịbanye n'òtù egwuregwu Championship dị mma karịa ikpo ọkụ oche na Premier League.
Obere oge mgbe egwuregwu 15 na Peterborough United (ebe o meriri), Benjamin White nwetara oku nke akara aka. Ọ bụ oku mbinye ego ọzọ si n'aka onye nkuzi bọọlụ kacha asọpụrụ - onye Marcelo Bielsa.
Ndụ na ekwuru:
Na 1 July 2019, Ben White bịanyere aka na klọb Championship Leeds United na mbinye ego. Naanị mgbe ọ banyere na klọb ahụ, Bielsa mere ngwa ngwa tinye ya n'ime ụlọ U23 ụlọ. Ben ama okop ubiak ke ubiere oro. N'okwu ya;
Ndị egwuregwu egwuregwu mbụ gwara m ka m tachie obi, na-aga n’ihu dịka ọ bụ ule niile. Ọ dabara nke ọma, m weere ndụmọdụ ha, dịka otu ụbọchị tupu egwuregwu na Bristol, Blelsa tụbara m na otu egwuregwu mbụ.
Egwuru egwu n'okpuru njikwa nke enigmatic Marcelo Bielsa were Ben Whtie gaa mmeri nke ọrụ ya.
You maara?… Ya n'akụkụ ndị a ma ama - ezigbo enyi ya (Kalvin Phillips) na Chibuike Nwokocha nyeere Leed aka ị nweta 2019-2020 EFL Championship.
Ben White football maka Leeds United wetara ya nsọpụrụ anọ dị ukwuu. Ha gụnyere; EFL Championship PFA Player for August 2019, EFL Championship Goal for July 2020, PFA Team of the Year (2019-2020 oge) na Leeds United Young Player nke 2019 - 2020 Oge.
Nke a bụ ihe ngosi vidiyo nke na-eme ka mkpuchi gbara gburugburu Ben White n'oge ụbọchị ebube ya na Marcelo Bielsa's Leeds United.
Mgbe ọnwa ole na ole na-ekwu banyere ọdịnihu ya, Brighton ji iwe jụ ọnụ ọgụgụ atọ maka Ben White. Site na mmesi obi ike nke egwuregwu bọọlụ nke mbu, nwa afọ Poole kwụsịrị ịgbazinye ego ya ma mesịa sonye na Seagulls Albion ọ hụrụ n'anya.
N'ọtụtụ oge, e toro White maka ezigbo ọrụaka ya na ike ya. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ọ bụ ihe karịrị nanị onye na-agbachitere ya. White (na oge 2020/2021) nwere mmetụta "dị jụụ" na "dị jụụ" mgbe ị na-enyere aka Yves bissouma na ọnọdụ nchebe ya.
Njirimara na-agbachitere White tinyere ikike ị ga n'ihu na-aga n'ihu na ọgụ mgbochi mere ka asọpụrụ kachasị ọrụ ya. Ihe dị ka Mee 2021, akpọrọ Brighton & Hove Albion's Player nke Oge 2020-2021.
Ben White meriri mmasị nke Leandro Trossard, Ex-Chelsea sensashion - Tariq Lamptey na Neal Maupay iji nweta nhoputa ma mechaa nweta nturu ugo.
Oku ndi England:
Na ọtụtụ ndị na-agbachitere na England, ọtụtụ Fans kwenyere na aha dịka Ben White agaghị ebe ọ bụla a ga-ahụ na ndepụta Gareth Southgate nke ndị egwuregwu maka Euro 2020.
Agbanyeghị, mgbe oge 2020-2021 pụtara ìhè (dị ka a hụrụ na vidiyo ya dị n'okpuru), onye njikwa England enweghị ike inye aka n'eziokwu na Ben White kwesịrị ịnọ na atụmatụ mba ya. N'ihi nke ahụ, White kpọrọ oku ka ndị otu egwuregwu nke England.
Enweghị asịrị na-efegharị - eziokwu ahụ bụ na aha ya agaghị eme ka ọ bụrụ nhọrọ ikpeazụ, Ben mere otu ihe. Ọ lekwasịrị anya na itinye egwuregwu mbụ mara mma na uwe elu England.
Na ubochi nke asaa nke June 7, Ben White nwere ujo nke ndu ya. A kpọrọ ya aha ndị otu 2021-maka otu maka Euro 26 dị ka onye dochie anya merụrụ ahụ Trent Alexander-Arnold. Nke a bụ ihe kpakpando England kwuru mgbe ọ na-agwa ndị mgbasa ozi otu esi enweta nhọpụta ikpeazụ nke Euro.
Eziokwu kwuo, echi dị ime, ọ nweghịkwa onye ma ihe ọ ga-eweta. Kedu onye n'ime ụwa ga-eche na nwata nwoke tara ahụhụ site na nwata na-emesị bụrụ onye a jụrụ ajụ football ga-ebili n'ụzọ a? Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu banyere Ben White Bio, bụ akụkọ ihe mere eme.
O nwere enyi nwanyi ma obu nwunye?
Mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama, ọ bụ ihe dị mma maka ndị fan ịmalite ịjụ ụdị ajụjụ ndị a ọkachasị dịka ọ gbasara ndụ ịhụnanya ya. Eziokwu ka a kwuru, Ben White bụ nwoke mara mma nke ukwuu ma ọ kwesịrị ka nwanyị kwesịrị ịbụ enyi nwanyị ya ma ọ bụ nwunye ya.
Anyị enyochaala ịntanetị ruo na June 2021, ọ nweghị ihe ịrịba ama nke onye hụrụ gị n'anya. Ihe na-eme ka anyị kwubie na nne na nna Ben White nwere ike ịgwa ya ka ọ ghara ịlụ. Mkpebi a kwesịrị ịbịa, ọbụlagodi, maka oge a dị oke mkpa nke ọrụ ya.
Ben White Ndụ nke Onwe:
Ikekwe ị nwere ike ịjụ… Gịnị ka Ben na-eme n'ụbọchị ọ kwụsịrị ma ọ bụ n'èzí football? Nnyocha nwere ya na Ben mara ezigbo mma ibi ndụ ọfụma ebe ọ na-echezọ ọrụ.
N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, mgbe ọ na-ala n'ụlọ site na ụbọchị egwuregwu ma ọ bụ ọzụzụ, bọọlụ na-aga n'azụ ọkụ.
Ndị maara ya kwuru na ha na-ahụ Ben White mgbe niile na nkịta ya nke ọ na-agagharị mgbe niile. Ọzọkwa, na o nweela olulu ọkụ n'ubi ụlọ ya ebe ọ na-eme achịcha.
Ọ na-adịrị ya mfe ịdọpụ uche na ịme onwe ya obi ụtọ. N'adịghị ka ndị enyi ọ tolitere, Ben ahọrọla ịghara ịga ụlọ akwụkwọ disko ma ọ bụ oriri na ọ atụ atụ na ụlọ ịgba egwu abalị. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, nke ahụ bụ nhọrọ ya ma ọ bụghị nne na nna ya kpebiri.
Prank na Patrick Bamford:
N'otu oge, Ben na-acha ọcha tụbara onye England na-egwu ya ọchị nke dara. Ihe niile malitere mgbe Bamford hapụrụ ụgbọ ala ya emeghe ma lezie anya. Ben jiri ohere ahụ gwuo egwu banyere ya.
Idebe Pat alaghachi n'ụgbọ ala ya, ọ pụrụ ịchọta biskit nkịta na mmiri nwere nnyapade nke ọ wụsara n'ime ụgbọ ala ya. Ben jiri nke ahụ kpochapụ ụgbọ ala ya - mee ka Bamford chee na ọ bụ ohi.
Mgbe Pat chọpụtara na ọ bụ Ben White, ọ bọwara ụbọchị ole na ole mgbe nke ahụ gasịrị. N'ụbọchị a, Ben White na-achọ ịhapụ ọzụzụ mana enweghị m ike ịhụ igodo ụgbọ ala ya. N’ụzọ dị ịtụnanya, ndị otu ya gwara m ebe ọ ga-ahụ ha.
Ozugbo Ben White ji mkpịsị ugodi n'aka ya, ọ chọpụtara na ụgbọ ala ya anọkwaghị ebe ọ hapụburu ya. Na-awụ akpata oyi n'ahụ, Patrick Bamford na-anya ụgbọ ala ahụ ma dọba ya na mpụga HM ​​(ụlọ mkpọrọ dị na nkeji 5 site na Elland Road).
N'ihi na Patrick Bamford nyere aka ịkpọrọ Ben ịnakọta ụgbọ ala ya, onye na-agbachitere England echeghị na ọ bụ onye kpatara ya. N'ezie, ọ kwesịrị ịma nke ọma karịa.
Ben White si ebi ndụ:
Ihe mbụ, anyị na-amalite site n'echiche ejiji ya. Ben nwere ike ọ gaghị abụ ndị mara mma nke mara mma kachasị mma ịhọrọ ejiji. Agbanyeghị, ọ hụrụ n'anya ijikọ mma ya wee yi uwe ndị kwesịrị ekwesị.
N'èzí football, Ben na-eme ihe dị ka ụdị ndụ ya dị umeala n'obi. Otu n'ime ndị a bụ ịga njem naanị ya n'akụkụ oke osimiri ebe ọ na-eme ihe omume ọkacha mmasị ya - ịkwọ ụgbọ mmiri. White na-enwe mmasị na ya ọbụlagodi na ọ ka nwere ikike nke iguzo na ya.
Ndụ White White:
N’ụlọ ya, e nwere omenaala nke na-achịkọta ha niile ọnụ. Onye ọ bụla nọ n’ezinụlọ Ben White na-ahọrọ ịga ụlọ ya rie nri abalị Krismas. Ọ bụrụ na ị maghị, nke a bụ ihe kpatara Ben ji dozie mmanya na ubi ụlọ ya.
Isoro nne na nna ya, ụmụnne ya na ndị ikwu ya nọrịa na-egosi oge ịhụ ngalaba na-ahụ n'anya na-enweghị mkpali. Ọzọkwa, na-agba ume na-enweghị gabigara ókè. N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị gbasara ezinụlọ ya na-amalite na nne na nna ya.
Banyere Ben White Nna:
N'adịghị ka nwunye ya, Injinia Barry enweghị mmasị na football. Ọ hụrụ egwuregwu ahụ n'anya n'ihi Ben. Barry White na Carole elelela egwuregwu ọ bụla nke Ben kemgbe ọ dị afọ anọ - site na ndị nsọ, ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ Brighton, Newport na Peterborough.
Ebe ọ bụ na ego na-elekọta ya, Barry ahapụlarị ọrụ ubi ya na ụlọ. Naanị ihe ọ na-eme bụ ile bọlbụ nwa ya nwoke. Dị ka Ben si kwuo;
Echere m na enwere m nnukwu obi ụtọ. Ọ bụghị ọtụtụ ndị ọgba bọọlụ mụ na ha gwuru ka ndị nna ha na nne ha na-eme nke a kwa izu maka ha. Enwere m ekele n'ezie ma enweghị ike ịchọrọ maka nne na nna ka mma.
More na papa Ben White, ọ nwere ike ịmasị gị ịmara na Barry agatụbeghị egwuregwu dị iche-ebe nwa ya nwoke esoghị. Ọbụna egwuregwu nke Njikọ. Ọ bụ naanị nwoke na-elekwasị anya na egwuregwu ahụ dịka ọ gbasara nwa ya nwoke.
Banyere Ben White Nne:
Carole bụ ụdị nke na-enweghị ike iji otu ụbọchị na-erughị nso nwa ya ọ hụrụ n'anya. O kwuru na ha na-ekwukarịrị nke ọma, ugboro ise n'ụbọchị. N’oge Ben na Leeds Carole na Barry gara soro ya nọrọ n’ụlọ ya na York.
Ebe ọ bụ na ọ bịanyere aka n'akwụkwọ nkwekọrịta ọkachamara, Ben White Mama guzobere ọdịnala nke ịme achịcha tupu oge egwuregwu na izigara nwa ya nwoke ozi tupu ọ gaa egwuregwu.
Tupu egwuregwu ya, m na-ezigara Ben otu ederede mgbe niile: 'Nwee obi ụtọ, hụ gị n'anya.'
Ọ bụ ezie na ọ na-achọ ka Ben na-ekpori ndụ mgbe niile, ụjọ kachasị ya bụ ịhụ ya ka ọ merụrụ ahụ nke igwu egwu. N'ihi nke a, Carole ịghọta football bụ na Ben kwesịrị ịme njem mgbe niile ma ghara ịba mba ma ọ bụ jigide bọl ahụ. Ọ kọrọ otu oge;
Ben nwere ike inwe obi ike oge. Na mkae m na-eti mkpu mgbe niile na-asị… Ben, gbaa bọl! Gbapụ bọl ahụ! ' ya na eriri afọ m.
Ikiri ka o jiri ihe bọọlụ were ihe egwu adịghị mma akwara m. Ọ bụ ụjọ.
Carole anabatala ogologo oge na Ben enweghị ike ịga ebe niile na-agagharị oghere na-enweghị mmejọ ọ bụla. Otú ọ dị, ọ chọrọ na ụbọchị ahụ agaghị abịa. Ben White gwara ya ozugbo;
Mama, m ga-etinye n'akụkụ abụọ na egwuregwu m. Ọ bụrụ na enweghị m ike ịme ihe jọrọ njọ, m ga-agbasi mbọ ike n'ọrụ m. Ma ee, amaara m na m nwere usoro dị mma ma enwere m obi ike na bọọlụ.
Ben White Nwanyị:
Ruo na nyocha nwere ike ịkọ, Ellie bụ naanị nwanne ya. Carole na Barry nwere ya n'oge gara aga, nke pụtara na ọ tọrọ nwanne ya nwoke.
Ben gosipụtara na ọ na-abụkarị FaceTimes nwanne ya nwanyị na nwa nwanne ya nwanyị bụ Louie. Site na itinye ya, ọ pụtara nwanne ya nwanyị, Ellie lụrụ nwanyị ma nwee nwa ugbu a.
Ndị ikwu Ben White:
Onye kacha ewu ewu n'etiti ha bụ nwanne nna ya Malcolm bụ onye na-anwụ anwụ Manchester United. Ndị nne na nna Ben White yana Malcolm ya niile nwere ọrụ na njikwa ọrụ ya.
Akwụkwọ akụkọ Brighton na Hove Albion